Iyo Dhijitari Wallet uye Ramangwana reZvekubhadhara | Martech Zone
Iyo Dhijitari Wallet uye neRamangwana reMabhadhariro
China, December 1, 2011 Chitatu, November 30, 2011 Douglas Karr
Muna 2011, huwandu hwepasi rese hwebhadhariro yekubhadhara nharembozha unosvika kumadhora mazana maviri nemakumi maviri negumi asi nemuna 241, izvo zvinotarisirwa kudarika $ 2015 tiririyoni! Pasina kupokana ndosaka yega yega kiredhiti kadhi kiredhiti uye pamhepo mubhadharo gedhi rakaomarara kubasa kuisa mazana emamirioni emadhora mukati Pedyo neMunda Kukurukurirana tekinoroji uye nzira dzekubhadhara.
Nekuwanda kwemawebbandband network uye nhare mbozha, nzira yatinobhadhara nayo zvinhu inotarisirwa kuchinja zvakanyanya mumakore mashoma anotevera. Isu takabva kumahombekombe uye mabheji kumari yemapepa kune inozivikanwa kadhi rechikwereti mukati mezviuru zvemakore mashoma.
Tags: digito chikwamamobile kubhadharapadyo nemunda kutaurirananfc
Nhoroondo yekutumira mameseji